Miandrandra filaminana, manantena fandrosoana ary fialana amin'izao fahantrana sy olana goavana izao isika mianakavy amin'ny taona 2019 ho avy tsy ho ela. Horaisintsika amim-pifaliana izany fahazavana izany. Koa irariako, irarianay mivady sy ny ankohonanay ho taon-tsambatra feno fanantenana sy fahazavana ny taona 2019 ho avy.
Mirary faran'ny taona milamina, tsisy hotakotaka sy korontana, ho antsika rehetra eto am-piandrasana ny didy fanapahana farany ataon'ny HCC isika mianakavy. Efa mandresy isika ary tsy maintsy mbola handresy satria ny fitiavana no lehibe indrindra.